Germany iyo Argentina oo isku soo haray – LaacibOnline
Germany iyo Argentina oo isku soo haray
Teegaarayaasha kubadda cagta Argentine ayaa u dabaaldegaya kooxdooda u soo baxay cayaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka.
Argentina waxay cayaartay kulan lagu tilmaamay mid labada koox aysan wax badan is dheerayn, iyadoo Netherlands iyo Argentina midna ay ku guulaysan waysay in ay ka gudubto difaaca adkaa ee ay isku dhigeen.
Hase yeeshee, maadaama ay labada koox midna guulaysan waysay oo eber iyo eber ay ku kala baxeen, ayaa tartanka lagu kala baxay rigoorayaal.
Waxaa 4-2 rigoorayaasha ku badisay kooxda dalka Argentina oo goolhayaheedu uu laba laad ka qabtay kooxda Netherlands.
Balse taageerayaasha Netherlands oo BBC la hadashay aad ayay uga niyadjabeen natiijada:
“aad baan uga niyadjabay in rigoorayaal kooxda looga adkaado, balse cayaaraha ayaa sidaas ah, waad guulaysanaysaa ama waa lagaa guulaysanayaan, waana nalaga adkaaday hadda.” Dutch fan, m in French: “Kooxda Netherlands waa in ay guulaysataa, fursado badan ayay heleen intii ay socotay cayaarta, Argentina difaac ayay cayaaraysay, marka aad baan uga xumahay, aad baan uga xumahay.” Taageere Jarmalka.
“Argentina ayaa hadda kulan la wada sugayo cayaarta kama dambaysta ah kula yeelan doonta kooxda dalka Jarmalka garoonka Rio di Jenerio.” Taageere Jarmalka.
Kooxda Germany wali waxay qabtaa carcartii ay kala soo noqotay cayaartii ay la yeelatay martigaliyayaasha koobka ee Brazil, kuwaas oo si aan horay loo arag loogu barbartay kooxda Brazil. Germany 7-1 ayay uga adkaatay Brazil.
Argentina laba jeer oo hore ayay ku guulaysatay koobka adduunka waxay ahayd 1978 iyo 1986, oo kooxda Jarmalkii galbeed ay ahayd koobdii ay koobka ka maroorsatay.
Kooxda Jarmalka, waxay iyadu koobka ku guulaysay sadex jeer oo hore, 1954, 1974 iyo sanadkii 1990-kii.
Hadaba waxaanu sugnaaba kooxda qaadan doonta maalinta Axadda ah koobka adduunka, labada koox ee Germany iyo Argentina oo lagu tilmaamo laba koox oo miisaankooda koobka adduunka iyo taariikhda ay ku leeyihiin ay aad u mug wayn yihiin.
← Sabti, Nov 21, 2020-Ciidamada Itoobiya oo magaaladii labaad ka qabsaday xoogagga TPLF
Sabti, Nov 21, 2020-Maamulka gobolka Hiiraan oo xabsiga dhigay shaqaalaha Shirkadda Korontada Baledweyne →
Tababaraha England Hodgson oo iscasilay